Galmudug: Doorashada Gudoomiyaha Baarlamanka iyo Qiimaha Lacagta uu Codka Xildhibaanku Gaadhay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Galmudug: Doorashada Gudoomiyaha Baarlamanka iyo Qiimaha Lacagta uu Codka Xildhibaanku Gaadhay
Jan 17, 2020 - 3 Aragtiyood
Dhuusamareeb ( Kalshaale ) Waxaa maanta magaalada Dhuusamareeb Lagu dooran doonaa Gudoomiyaha Cusub ee Baarlamaanka Galmudug. Waxaana Saacadihii lasoo dhaafay magaalada laga dareemay Olole Xoogan oo ay Wadaan Musharixiinta u taagan Xilkaasi.
Waxay magaaladu marti gelisay kulamo iska soo horjeedo oo ay wadeen xubnaha mucaaradka iyo kuwa Dowladda Soomaaliya taageersan, iyadoo ay socoto kala jiidasho dhanka Xildhibaanada ah, Waxaana Hoyga ay dagan yihiin Musharixiintu xalay laga dareemay Mashquul badan iyo kulamo aan loo kala kicin.
Dhinaca kale Xog aanu helnay ayaa sheegaysa Inay Bilaabeen Musharixiintu inay Bixiyaan Lacago ay Siiyaan Xildhibaanada, Kuwaasi oo Codkooda uu kala iibsi galay, Waxaana Qiimaha halkii xildhibaan uu gaadhay lacag u dhaxeyso 3-kun ilaa 10-Kun oo Dollar.
Xildhibaan Axmed Macalin FIQI oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhaniisa Xildhibaanada Cusub ee Galmudug uga digay inay Codkooda iibsadaan. “Xildhibaankii codkiisa laga gado waa in uusan isla xisaabtan iyo nidaam daahfuraan ku tala-gelin, ninkii codkaada aad ka iibiso sharafkaraa ayaad ka iibisay!”
Ammaanka Magaalada Dhuusamareeb ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana qaar ka mid ah Musharaxiinta ay walaac ka muujiyeen sida ay wax u socdaan, Waxaana la aaminsan yahay in Doorashada Gudoonka Baarlamaanku ay Halbeeg u noqon karto Doorashada Madaxwaynaha ee soo socota.
Reer galmudug guuleysta,waxanu idinka rajeyneynaa maamul soomaaliyeed oo daacad ah, oo u damqada dalka,dadka,diinta,oo difaaca.
Qabiil iyo qabqable,hadey wax tarayaan,30sano,ayaynu rafaadney.
Min mucaarad ah oo shaadh afarjeeble ah toshay yaanu maskaxda idinka xadin.
Galmudug waa meesha ugu dhibyar
Somalia dadka degaana waa dadka ugu sedaqa bixinta badan Somalia
Bidaartaa gareen(Gacal)ayaa ku guulaysanaaya waa caddahay villa wardhiigley hore u soco dalkaan dhinac ha u dhaco.